युएन वुमनको टप फाइभमा डा. रुना - आजकी नारी - नारी
युएन वुमनको टप फाइभमा डा. रुना
विश्वव्यापी रुपमा महामारी बनेको कोभिड –१९ भाइरसको लडाईंमा दिनरात खटिएकी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झालाई युएन वुमनले सम्मानित गरेको छ । युएन वुमनले कोरोना भाइरसको अग्रपंक्तिमा खटिइरहेका विश्वका ५ महिलाको सूचीमा डा. रुना पनि पर्न सफल भएकी छिन् । डा. झा कोराना भाइरसको लडाईंमा चौबिसै घन्टा लागिपरेकाले सम्मानित गरेको हो ।
उनी चीनको वुहानबाट नेपाल ल्याइएका १ सय ७५ जनाको रेखदेखदेखि हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसको परीक्षणदेखि पिसिआर ल्याबमा आफ्नो नेतृत्वमा सफलतापूर्वक खटिएकी छिन् । नेपालको कोरोना विरुद्धको लडाईंमा सुरुदेखि नै आफ्नो नेतृत्वमा चुनौतीका बाबजुद काममा दिनरात खटिरहेको र उनको टीमले राम्रो काम गरेकाले विश्वको ५ महिलमा डा. रुनालाई समावेश गरिएको हो ।
आफ्नी सात वर्षीया छोरीलाई आमाबुवाको जिम्मा लगाएर काममा लागिपरेकी डा. रुनाले छोरीलाई अंगालो हाल्न नपाएको महिनौ भयो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा छोरी तथा अभिभावकसँग अलग रहेर उनी आफनो कर्ममा दिनरात लागिपरेकी छिन् । यो सम्मानले कोरोना विरुद्ध लागि पर्नका लागि थप हौसला प्राप्त भएको उनले बताइन् ।
चैत्र २८, २०७६ - पहिले भन्दा व्यस्तता बढेको छ
आश्रितीको ‘करण र कार्टुन’ वैशाख ६, २०७८
रूपालाई मिडिया एक्सिलेन्सी अवार्ड चैत्र २७, २०७७